Abamuru nke Mkpụrụ osisi Artificial | JIAWEI
Plantsdị dị iche iche nke ahịhịa na-arụ ọrụ n'ụba na ụdị zuru ezu. Dabere na echiche nke “akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, gburugburu ebe obibi, mmekọrịta dị mfe, mara mma ma mara mma”, anyị na-agba mbọ ịmepụta ahịa pụrụ iche maka ahịhịa simulated, iji mee ka ndị mmadụ na-eme ka ndụ ha gbanwee, gbanwee njikọta mara mma nke gburugburu ebe obibi, ma na-agbanwe ndụ ndị mmadụ jupụta ụwa. ya na ọ enjoymentụ mara mma ma mekwaa gburugburu, ma dị mfe ma chọọ mma obibi.
Ugbu a, ka anyị leba anya na uru nke osisi simulated
Nke mbu: Nke mbu, mbido ndi mmadu ga ahọrọ ahihia ahihia bu ka iji ya mee ihe icho mma. Ebe ọ bụ na ejiri ya chọọ okike mma n'ihi na ọ bụ ihe dị adị ma bụrụ nke a na-ahụ anya, ihe ndozi ahụ mara mma zuru oke .Akụkụ anụghị oke na-esiteghị na ọnọdụ ọnọdụ dị ka anwụ, ikuku, mmiri na oge .behe ọzara ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ gobi tọgbọrọ n'efu nwekwara ike ịmepụta ụwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị ka oge opupu ihe ubi afọ niile. Na mba dị iche iche, enwere ike iji ebe dị iche iche dịka ihe ịchọ mma, dị ka ubi, ebe nkiri, ebe azụmahịa, ụlọ obibi, plazas, nnukwu ụlọ ahịa, n'okporo ụzọ na osimiri, wdg. ya na osisi ndia.
Nke abuo: Umu ahihia achoghi nlebara anya ubochi puru iche. Emela mmiri ma ọ bụ mee ka ifatilaiza. Anyị kwesịrị iji ehicha mmiri mgbe mmiri dị n’elu akwụkwọ n’ihi na ájá ga-adị ogologo oge. Enweghị mkpa iche na osisi ga-akpọnwụ ma kpọnwụọ. Ọ na-azọpụtakwa ụgwọ kwa ụbọchị ike na njikwa.
Nke ato: N’akuku ihe eji ewusi ulo, a ghaputala ihe eji echeputa ihe na okike ya, otutu uzo di elu na-aputa n’ime ndu anyi.The plant artificial na-eweputa nkwụ ya na uto ubi mara mma n’ime ime ulo, ichoro ikari a chọrọ ụdị oghere ma mepụta mmetụta nke odida obodo ghọtara na ahịhịa nkịtị enweghị ike iru.